musha nyika dzakabatana Politicians Kamala Harris Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Kamala Harris Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri Kubva, Murume, Vana, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Muchidimbu, isu tine chinyorwa chipfupi kubva parwendo rwake achiri mudiki kusvika mazuva ake ane mukurumbira. Kuti uratidze hunyanzvi hwehupenyu hwako, heano mubhedha wake kune vakuru gallery - chidimbu chepikicha cheKamela Harris 'Bio.
Iyo Hupenyu nyaya yaKamela Harris.
Hongu, iwe neni tinoziva iye akaita nhoroondo semukadzi wekutanga ane ruvara kuti asarudzwe semutevedzeri wemutungamiri weUS. Saka, isu tinofungidzira zvichave zvisinganzwisisike kana usati wanzwa nezvake. Gara wakabatana apo isu tichifukura nyaya yehupenyu hwake. Pasina imwezve ado, rega titange.
Kamala Harris Yemwana Nhau:
Kune anotanga Biography, ane zita remadunhurirwa rekuti "Momala." Kamala Devi Harris akazvarwa musi we 20th wa Gumiguru kuna amai vake, Shyamala Gopalan, naBaba, Donald J. Harris muguta re Oakland, California. Ndiye dangwe pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Tarira, amai veVice-Mutungamiriri weUnited States.
Mufananidzo wehudiki waKala Harris pamwe naamai vake, Shyamala.
Asati aberekwa Mudiki Kamala Harris, vabereki vake vakasangana panguva yesangano rekodzero dzevanhu vekuUS. Saka Kamala akaona kuwanda kwekufora kwekodzero dzevanhu achikura ari mwana wevabereki vanobva kune dzimwe nyika.
Yakanga iri ipapo; akadzidza nyika yaanoti kumusha (USA) yakanga isina hushamwari kuvagari vake vemavara. Zvakangodaro, akararama hupenyu hwake achifara nasisi vake (Maya), munharaunda yeBerkeley.
Harris anotasva carousel mune ino yekare yevana foto.
Kare kumashure - kunyangwe kuchikoro, Harris akamiswa kubva pakutamba nevamwe nekuda kwevara rake. Aya maitiro akamupa moyo unovava kunge nyika yeUS.
Semwana mudiki, akambomuratidza achibudirira masimba ezvematongerwo enyika nekuronga kuratidzira. Kuratidzira uku kwaipesana nemuridzi wechivako aisatendera vana vemunharaunda kuti vatambe patsangadzi.
Kuroora Kwevabereki Nyaya:
Vabereki vaKala Harris vakarambana aine makore manomwe (7). Pakazosvika makore gumi nemaviri, mhuri yake yaive yatamira kuMontreal, Quebec, kuCanada. Panguva yaakadzidza kutaura chiFrench - panguva yake munyika.
Kamala Harris Mhuri Kubva:
Zvinonakidza kuti maUS anogamuchira sei vanobva kune dzimwe nyika kuti vave vagari. Izvo zvevabereki vaKamela Harris hazvina kumbosiyana. Dzinza raamai vake rinobva kuTamil Nadu, India, apo baba vake, Donald Harris, vakazvarwa muJamaica. Nekudaro, Kamala Harris akaberekerwa muOakland, California.
Mepu inoratidza Kamala's Indian Family midzi.
Kunyangwe baba vaKamala vanoti vanobva kuIrish. Tsvagiridzo inomuziva semhuri kubva kune weIrish-akazvarwa muBritish shuga murimi uye muridzi wevaranda muSaint Ann Parish, Jamaica. Ainzi Brown Hamilton. Nekudaro, tichimumbundira ese ari maviri maSouth Asia uye eVatema kuzivikanwa, tinogona kutsanangura mhuri yaKamela Harris seAmerica asi vane hunhu hwemarudzi mazhinji.
Kamala Harris akaberekwa kuna amai vake, Shyamala Gopalan; Indian-American biologist uye Civil kodzero mumiriri uye kuna Baba vake, Donald J. Harris muJamaican-America. Ivo Baba ndivo economist uye purofesa anobva kuSaint Ann's Bay, muJamaica.
Imba yeKamala Harris imhuri yezvematongerwo enyika uye yedzidzo ine nhengo dzinoverengeka dzinozivikanwa. Saka, hazvisi kunze kwenzvimbo yekuti Kamala apinde muhofisi yeruzhinji.
Mufananidzo wekutanga waKamela Harris mum, vanamai nasekuru nasekuru.
Sekuru vake veIndia vaive mukuru-mukuru wehurumende. Murume mukuru akarwira rusununguko rweIndia, mukadzi wake ari muratidziri aifamba mumaruwa achidzidzisa vakadzi varombo nezvekudzivirira kubata pamuviri muIndia.
Kamala Harris Dzidzo:
Kune mhuri, dzidzo yaive yekutanga. Harris akaenda kuWestmount High Chikoro muCanada. Ndichiri kuwana dzidzo ipapo, ndangariro yake huru yaive yekutanga kambani yekutamba neshamwari.
Heano Harris mushure meBachelor's Degree kubva kuHoward University.
Paakadzokera kuAmerica, Harris akaenda kuYoward University. Yaiva ipapo iyo yaakakoshesa mune zvematongerwo enyika nesainzi. Kutenda kubwinya kwake, akasarudzwa mukanzuru yevadzidzi vehunyanzvi. Harris akabva anyoresa kuUC Hastings College yeMutemo, achiwana iye JD muna 1989.
Kupedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeCalifornia Hastings Koreji yeMutemo muna Chivabvu 1989.
Mushure mekubata mutsara wezvematongerwo enyika, Harris akatanga basa rake semutevedzeri wedare redzimhosva muAlameda County. Kusarudzwa uku kwaive mushure mekuwana kubvumirwa kuState Bar yeCalifornia muna 1990. Akazove gweta rinotungamira reCareer Criminal Unit muSan Francisco District Attorney's Office mu1998.
Zvizhinji gare gare, Harris akagadzwa kuve mukuru weDunhu neNharaunda yeVavakidzani. Pakati peino nguva, akasimbisa Bureau yekutanga yeHurumende yevana muna 2000. Panguva iyi, aive achiri kuita basa rekuratidzira kurwira zvakanakira vagari.
Kamala Harris, kurudyi, naGwen Whitfield pakuratidzira kunopokana nehutongerwe enyika paHoward University.
Kamala Harris Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Muna 2002, Harris akagadzirira kumhanyira kuGweta reDunhu reSan Francisco kunopesana neaimbova mukuru wake, Hallinan. Akakunda sarudzo muna 2003, achimuita munhu wekutanga wemavara kuti asarudzirwe chinzvimbo ichocho.
Zvizhinji gare gare, akazove wekutanga Mutema, mukadzi wekutanga kubata chinzvimbo chegweta guru reCalifornia mu2010. Zvisinei, sezvakaitika kare sekukunda kwake kwaizoita sekumwe, dzimwe sarudzo dzaakatora segweta guru dzakadzoka kuzomutambudza.
Nguva pfupi yapfuura muna 2016, mushure memakore saCalifornia junior senator. Harris akaita nhoroondo zvakare. Akamhanya ndokuhwina chigaro cheCalifornia muSeneti.
Kunyemwerera kwoushamwari kweanokura anokunda.
Zvake zvaakaita zvaisanganisira kutsigira kune mumwe-mubhadhari wehutano hurongwa. Iye, mukuwedzera, akatsigira kuiswa kwemitemo. Rutsigiro urwu rwaive rwekuwedzera mukana wekunze kwenzvimbo dzekuvaraidza mumaguta. Kunze kwezvo, iye aipa rubatsiro rwemari kumhuri dzinowana mari shoma. Rubatsiro rwakawedzeredzwa kuwedzera kune avo vakatarisana nemusika unodhura wedzimba muCalifornia.
Kamala Harris Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Kutenda kugona kwake kwezvematongerwo enyika, Harris akaenderera mberi nekunyora misoro. Sechikamu cheSeneti Intelligence Committee, aizosangana neGweta Guru Jeff Sessions. Kupokana uku kwakanangana nekuonana kwake nevaRussia panguva yemushandirapamwe waDonald Trump.
Kamala haana kukwanisa kuvanza kutsamwa uye kusavimba nehutongi hwaTrump. Mushure mekuzvionera wega kuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei muWashington, akafemerwa kushandura nyika yake. Nekudaro kuda kwekutanga kutanga kurwira kumusoro.
PaMartin Luther King Jr. Day, yaive 21st Ndira 2019. Kamala akazvizivisa paGood Morning America kuti achakwikwidza semutungamiriri wenyika musarudzo dza2020. Akaona ino nguva senguva yekurwira zvakanakira United States.
Nekudaro, asina kubudirira pakubuda kwemutungamiri wenyika, akasarudzwa na Joe Biden semumwe wake anomhanya. Sarudzo iyi yakaita kuti Harris mukadzi wechina aoneke tikiti repurezidhendi rebato rezvematongerwo enyika muUnited States.
Aive wekutanga muSouth Asia munhu, uye mukadzi wekutanga Mutema akasarudzwa kuhofisi yenyika. Nhau dzakanaka ndedzekuti vaviri vacho vakabuda mukukunda pasarudzo dzeUS 2020. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Harris naBiden vakagadzirira kutora nzvimbo dzeHurumende yeAmerica.
Kamala Harris Kufambidzana Nhoroondo uye Kuroora:
Muna 2001, Mukadzi wekutanga mutevedzeri wemutungamiri-akasarudzwa kwenguva pfupi akanyorwa naMontel Williams, aimbova mukuru weThe Montel Williams Show. Nekudaro, hukama hwacho hwakagara kwenguva pfupi.
Senge panguva yekunyora iyi Bio, Kamala Harris murume ndiDouglas Emhoff, gweta revaJudha veAmerica. Vakasangana pasina zuva uye muchato wavo wepachivande wakaitirwa muSanta Barbara Courthouse, California musi wa22 Nyamavhuvhu 2014. Harris ndiye amai vokurera kuvana vake vaviri, Ella naCole, avo vanomudaidza nerudo kuti "Momala."
Harris nemurume wake vachienda kumutambo weGolden State Warriors basketball.
Gweta Douglas Emhoff aimboshanda naye-muhofisi kuVenable LLP's Los Angeles office. Vana vake vaibva kumuchato wake wekare kumugadziri wefirimu Kerstin Emhoff.
Kamala Harris Hupenyu Hwemhuri:
Kunyangwe ivo vabereki vake, Donald Harris naShyamala Gopalan, vakarambana vachiri mudiki, chisungo chakasimba chiripo pakati peveimba. Urwu rudo rwemhuri rwaizokonzeresa kuti vaedze kuona kuti Kamala neremangwana rehanzvadzi yake rakanga risina kukanganiswa neimwe nzira.
Kamala Harris nemhuri pazuva rake remuchato.
Chokwadi ndechekuti, vese vainakidzwa nekurerwa kwakanaka panyama, pamweya uye pamoyo. Zvakare vakakodzera kucherechedzwa kugadzikana kwavo kwemari uye kashoma kugona kwehunhu hweHutungamiri izvo zvino zvinoita kunge hunhu hwemhuri.
Nezve Kamala Harris Baba:
Donald J. Harris, wekuJamaican-America, ndibaba vake. Iye purofesa kubva kuSaint Ann's Bay City muJamaica. Donald J. Harris akaberekwa pa23rd yaAugust 1938 kuna Beryl Christie naOscar Joseph Harris. Tarira, mufananidzo wehudiki waKamela uye naBaba vake.
Mufananidzo wekutanga waKamela nababa vake.
Muna 1960, Donald Harris akawana BA kubva kuYunivhesiti Koreji yeWest Indies- Yunivhesiti yeLondon. Akatamira kuUS kunotora PhD kuYunivhesiti yeCalifornia, iyo yaakapedza muna 1966. Ndipo paive naShyamala vaina Kamala.
Kamala Harris Baba, Donald J. Harris akasangana nemukadzi wake wekare, Shyamala Gopalan, kuburikidza nesangano rekodzero dzevanhu. Zvizhinji gare gare, akarega basa kubva kuStanford, achive purofesa wezvekubuda muna 1998.
Kukanda kumashure kweKamela Harris Vabereki.
Nezve Kamala Harris Amai:
Shyamala Gopalan aive amai vaKamala Harris. Aive muratidziri wekodzero dzevanhu vekuIndia-America uye nyanzvi yezvipenyu kubva kuChennai, India. Iye akazvarwa kuna PV Gopalan nemukadzi wake, Rajam. Ipo Gopalan aibva kuThulasenthirapuram (musha weIndia), Rajam aibva Painganadu, mumwe musha wekurima muIndia.
Shyamala Gopalan aive nechipo muimbi weSouth Indian classical mumhanzi. Akakunda makwikwi emunyika mairi achiri kuyaruka. Amai vanonoka veVice President vemuUS vakaita mbiri muImba Sayenzi paLady Irwin College muNew Delhi, India.
Pana 19, Shyamala Gopalan akanyorera chirongwa che master paUniversity of California (UC), Berkeley. Pakupedzisira, akawana PhD muhutano uye endocrinology kuUC Berkeley muna 1964.
Simba rimwe chete rakakura raive Amai vake.
Akaongorora muDhipatimendi reZoology neCancer Research Lab kuYunivhesiti yeCalifornia Berkeley. Shyamala Gopalane akashandawo semuongorori wekenza yemazamu paUniversity yeIllinois uye University of Wisconsin. Akadzidzisa vadzidzi vazhinji murabhoritari yake uye akashandawo muLawrence Berkeley National Laboratory kwemakore gumi apfuura ekutsvaga.
Nezve Kamala Harris Vana:
Iye anongova chete-nhanho-vana vaanofarira hukama hwepedyo hwepedyo naye. Nekudaro, iye ane vaviri-nhanho-vana, Cole naElla vanobva kuDouglas Emhoff vanomudaidza kuti "Momala". Cole Emhoff akazvarwa musi wa 15 Gunyana 1995. Akapedza degree reBachelor mune psychology kubva kuColorado College. Cole Emhoff ari, mukuwedzera, mubatsiri mukuru ane chirongwa B Varaidzo.
Mufananidzo waKamala Harris pamwe nehubby yake nevana.
Ella Emhoff akaberekwa muna 1999. Akazotumidzwa zita remuimbi wejazz Ella Fitzgerald. Akapedza kudzidza mu2018 kubva kuchikoro chesekondari muLos Angeles (LA) Pandinonyora nhanho yamai mumi yake, iye zvino inyanzvi iri kuita machira uye zvipfeko kuParsons Chikoro CheMagadzirirwo.
Nezve Kamala Harris Sibling:
Maya Harris munin'ina wake uye munin'ina chete kuna Shyamala naDonald - vabereki vavo. Iye akazvarwa muChampaign-Urbana, Illinois, asi akakurira muSan Francisco Bay Area neMontreal, zvichiteerana. Maya Harris aive nemwana wake mumwe chete, Meena, kuna 17. Akapedza degree rake reBachelor of Arts kuUC muBerkeley.
Mufananidzo wekutanga waHarris nemunin'ina wake, Maya.
Maya, pamusoro pezvo, akawana degree reJD kubva kuStanford Law School. Iye zvino anoshanda segweta, mutsigiri weruzhinji, uye TV Commentator yeMSNBC. Maya Harris akaroora gweta Tony West muna Chikunguru 1998.
About Kamala Harris Hama:
Meena muzukuru waKala Harris. Iye munyori webhuku revana uye gweta. Meena ndiye aimbova mukuru wezano nehutungamiriri kuUber uye akazogadzira mushandirapamwe, achizivisa nezvenyaya dzemagariro. Bhuku revana vake rakaburitswa mu2020 riri pahupenyu nyaya yaamai vake natete. Meena nemurume wake Nikolas Ajagu vane vanasikana vaviri.
Mufananidzo waMeena Harris.
Pamusoro pezvo, muramu wake, Tony West. Ndiye mukuru wezano weUber uye aimbova mukuru weUnited States weDhipatimendi reJustice.
Nezve Kamala Harris Vanasekuru:
Kamala akafuridzirwa zvakanyanya nasekuru vake, mukuru-mukuru wehurumende akarwira rusununguko rweIndia. Akaita basa muLusaka saDirector weRelief Measure uye Refugees kuZambia. Kunze kwezvo, akakwanisa kupinda kwevapoteri vanobva kumaodzanyemba kweRhodesia (yava kunzi Zimbabwe). Kamala Harris Granddad akafa muna Kukadzi 1998.
Tarisai Mutevedzeri weMutungamiriri weUS aine mumwe waambuya vake, muratidziri akafamba mumaruwa achidzidzisa vakadzi varombo nezvekudzivirira kubereka.
Dzimwe hama dzinosanganisira Beryl Christie naOscar Joseph Harris, vaive vanasekuru vababa vake.
Kamala Harris Hupenyu hweMunhu:
Kutora zororo zvishoma kubva pahupenyu hwebasa rake, iye mumwe munhu anoramba achichengetedza hunhu hwake hwehudiki. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kuimba, kugona kubika kwevaIndia uye kujoinha kodzero dzevanhu. Semwana mudiki, Kamala ainakidzwa nekuchenesa machubhu ekuongorora amai vekenza, uye achiruka achitarisa katuni. Iye chete hanzvadzi, Maya Harris, anorondedzera Kamala seMad Crocheter.
Kamala achigadzirira Jerk Chicken marinade kumabiko eZuva raAmai.
Uye zvakare, Harris anofarira kuverenga uye bhuku rake raanofarira rinosanganisira Native Son rakanyorwa naRichard Wright, iyo Joy Luck Club naAmy Tan uye Iyo Kite Runner naKhaled Hosseini. Iye zvakare aida Rwiyo rwaSoromoni naToni Morrison, uye Iyo inozivikanwa CS CS mabhuku; Shumba, Muroyi neWardrobe.
Mukadzi anozvigadzirira, iwe unofanira kutaura. Isu tinoziva Kamala Harris yekutyora zvipingaidzo kwete kwete munzira yemushandirapamwe, asi nemari zvakare. Iye nemurume wake, gweta Douglas Emhoff, dzimba dzekugara muLos Angeles, Washington, DC, neSan Francisco. Forbes anofungidzira Kamala Harris nemurume wake kunge $ 5.8 mamirioni.
Heino mhuri yake yemamiriyoni mana emadhora masere emadhora ekuLos Angeles.
Net Kukosha uye Mari:
Kuzvishandira pachayo danho rezvematongerwo enyika reUnited States kwaona Kamala Harris anokosha madhora mamirioni matanhatu maererano neForbes 6 mushumo. Chokwadi ndechekuti, basa rake rezvematongerwo enyika ndiro rave iro rekutanga mari yake.
Kubva pamarekodhi ake emitero, muhoro weHarris wepagore uri mushoma pasi pe $ 160,000 pagore seneta. Kusarudzwa kwake segweta redunhu kwaita kuti akodzere mupenheni inosvika madhora mazana maviri nemazana mashanu ezviuru nhasi.
Zita rizere: Kamala Devi Harris
Zita rekudanwa: Kamala Harris
Zuva rekuzvarwa: 20 Gumiguru 1964
Nzvimbo yekuzvarirwa: Oakland, California, United States
Basa: American wezvematongerwo enyika uye gweta
Dzidzo: UC Hastings Koreji yeMutemo (1989), Howard University (1986), Westmount High Chikoro (1981)
Baba: Donald Harris
Amai: Shyamala Gopalan Harris
Vanun'una: Maya Harris (Hanzvadzi)
Hama: Meena Harris (Mumwe), PV Gopalan (Sekuru Sekuru), Beryl Christie naOscar Joseph Harris (Paternal Grand Vabereki) naTony West (mukuwasha)
Murume: Doug Emhoff (m. 2014)
Vana: Cole Emhoff naElla Emhoff
Hobbies: Kuimba, Kubika uye Kuverenga
kukwirira: 5'2 ”(1.57 m)
Net Worth: $ 6 mamirioni (Forbes 2019)
Kamala Harris Untold Chokwadi:
Tinovimba kuti wakazviwana zvichinakidza, kuverenga iye Biography kusvika zvino. Muchikamu chino, tinoona zvakakodzera kutaura chokwadi chidiki iwe chausingazive nezve pano.
Chokwadi # 1: Her Mabhuku:
Kamala akatanga kuve munyori muna2009 ne Smart on Crime: Chirongwa cheMuchuchisi weKubasa Kuita Kuti Tive Vakachengeteka. Iri bhuku rinoongorora huzivi hwake uye mazano ekuchinja-mhosva.
Iye kunze kwekuburitsa mabhuku maviri kutanga kwegore ra2019: Chokwadi Chatinobata: Rwendo rweAmerica rwunoratidza nezvehukama hwake uye kurerwa. Kechipiri, Superheroes Ari Kwese Kwese. Iri bhuku raive imwe memoir yakashandurwa mune yemifananidzo-bhuku fomu yevana.
Harris anoverenga kubva mubhuku revana vake "Superheroes Ari Kwese Kwese.
Chokwadi # 2: Nei zita rake:
Vabereki vaKala Harris vakamupa zita reIndia iro rakazove ramangwana rake. Iro zita, Kamala rinoreva "lotus," uye iri rimwe zita remwarikadzi wechiHindu Lakshmi uye kupihwa simba kwevakadzi. Izvo zvakanyorwa kuti tsika inonamata vanamwarikadzi inogadzira vakadzi vakasimba.
Chokwadi # 3: Akatungamira kuratidzwa semwana:
Ndichiri muMontreal, semwana ane makore gumi nematatu ekuberekwa, Harris nemunin'ina wake, Maya akatungamira kuratidzira kwakabudirira pamberi peimba yavo. Zvinoshamisa kuti kunyunyuta kwacho kwaipesana nekurambidzwa kwevana kutambira patsangadzi padhuze nepamba pemhuri yake.
Mufananidzo wehucheche waKamala Harris.
Chokwadi # 4: Makomborero uye Honours:
Pepanhau repamutemo reCalifornia, The Daily Journal muna2010, rakadoma Harris semumwe wevakuru vevamiriri vevakadzi makumi manomwe nevashanu muCalifornia. Vakamudoma semumwe wemagweta epamusoro zana mudunhu.
Muchuchisi anotyisa-akatendeuka-wezvematongerwo enyika akagara pakakwirira yenhoroondo.
Nguva zvakare yakambodaidzwa kuti Harris semumwe we "100 Vanhu Vane Simba Kwazvo Munyika." Zvino, mu2018, Harris akatumidzwa zita ra2018 mugashiri weEECOS Environmental Mubairo wehutungamiriri hwake mukuchengetedzwa kwenzvimbo
Chokwadi # 5: Chitendero:
Vabereki vaKala Harris vakamurera semuBaptist uye akabata nhengo yeTatu Baptist Chechi yeSan Francisco. Kereke iri musangano weAmerican Baptist muUS. Semwana, Harris aifarira kuimba mukwaya yeBaptist, akaendawo kutembere yechiHindu kunodzidzisa chitendero chemadzitateguru ake.
Harris nemurume wake uye Vafundisi kuThe First African Methodist Episcopal Church.
Tinotarisira kuti iwe wakakuwana kuri kukurudzira kuverenga Kamala Harris Biography. Kungofanana nevanhu vazhinji vanotambura kuputsika kwevabereki, hupenyu hwake hwehudiki hwainge hwakazara nematambudziko futi. Akaona kurambana kwevabereki vake achiri mudiki uye nemhedzisiro mhedzisiro yekusarura kwemarudzi achiri kukura.
Asi kuburikidza nezvose izvi, Kamal yasara uye yakaramba yakatarisa. Kunze kwezvo, kunamatira kumhuri nekutevera kuburikidza nezviroto zvake. Iye anochengetedza rudo uye shungu yekuona yakanyanya kunaka uye iri nani America. Kubva zvave VP, anga achiunza nyika ku gweta rake murume uye vana vake vokurera Cole naElla vanomudaidza 'Momala. '
Kuti uwane zvimwe zvinonakidza zvehupenyu uye inonakidza nyaya yehupenyu yevematongerwo enyika eUS, gara wakatarisana nesu. Nekudaro, iwe ungadai wakacherekedza chero kukanganisa mukutakura kwedu? Usambozeza kutaura nesu. Zvikasadaro, govera kufunga kwako muchikamu chemashoko nezveMutevedzeri Wemutungamiri weUS Kuti uwane pfupiso inokurumidza yeKamala Harris 'Bio, shandisa yedu tafura yewiki.